HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Yozgat Bozok waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaale qandaraas leh
jaamacadda yozgat bozok waxay samayn doontaa shaqaaleyn qandaraas
Isbitaalka Jaamacadda Yozgat Bozok ama cutubyo kale oo loo magacaabi doono Rectorate, 2018 Year KPSS (B koox) darajooyinka darajooyinka, oo ku saleysan qodobka 657 / B ee Sharciga Lambar. Iyadoo la raacayo Mabaadiida laxiriirta, shaqaalaha 4 qandaraas la siiyay ee loo shaqaaleysiinaayo iyadoo loo eegayo nidaamka habeynka ama habeenka waa la shaqaaleysiin doonaa.
Jaamacadda Yozgat Bozok waxay mas'uul ka noqon doontaa dhammaan macluumaadka ku saabsan xayeysiinta. www.bozok.edu.t waa ayaa la gaari karaa.
S. MAYA TITLE LAMBARKA AQOONSIGA
1 kalkaalisada 10 Inaad ka qalin jabiso waaxda kalkaalinta.
2 kalkaalisada 4 In laga qalinjabiyo waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadda.
3 kalkaalisada 1 Ka qalin jabiyay waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfada, waxay bixisay in ugu yaraan ay ka shaqeeyeen kalkaaliye caafimaad 3 sano xanaano iyo dhaqan celin isla markaana ay haystaan ​​shahaadada daryeelka da'da.
4 kalkaalisada 1 Wuxuu ka qalin jabiyay waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadda wuxuuna ka shaqeeyay kalkaaliye daryeel caafimaad KVC ugu yaraan 3 sanadood haddiise uu haysto shahaado.
5 kalkaalisada 2 Waa nin ka qalin jabiyay waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadaha wuxuuna ku shaqeeyey kalkaaliye caafimaad oo deg-deg ah ugu yaraan 3 sanadood haduu haysto shahaadada uuna haysto shahaadada daryeelka degdega ah.
6 kalkaalisada 1 Ka qalinjabiyey waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadda, si ay u hesho shahaadada kaaliyaha koowaad ee ay ansixisay Wasaaradda Caafimaadka.
7 kalkaalisada 1 Ka qalinjabiyey waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadda oo haysata shahaadada urodynamics.
8 kalkaalisada 1 Ka qalinjabiyey waaxda kalkaalinta caafimaadka ee dugsiga sare ee xirfadda, si loo haysto shahaadada daryeelka dhaawaca.
9 umulisadaada 2 Inaad ka qalin jabiso waaxda umulisooyinka.
farsamo- 1 Ka qalin jabiyay waaxda maqalka maqalka iyo shahaadada farsamada hurdada.
shaqaalaha 1 Markaad haysatid shahaadada koowaad ee waaxda cilmiga maqalka oo aad ka soo shaqeysay machadyo heer jaamacadeed ugu yaraan 2 sano ayaa la siiyay inay cadeyso.
Taariikhda Codsiga: 25 / 11 / 2019-09 / 12 / 2019 Ilaa Isniinta saacadda 17.00,
Goobta Codsiga: Codsiyada waxaa loo gudbin doonaa Waaxda Shaqaalaha ee Jaamacadda Yozgat Bozok shaqsi ahaan.
Jaamacadda Yozgat Bozok waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
Qorista Shaqaalaha ee Jaamacada ee Yozgat Bozok